China 3 na 1 Ime ụlọ / N'èzí Playhouse Pop Up Poplọikwuu ya na Ọwara ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Sisili
3 n’ime 1 Ime /lọ / Ime Playlọ Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Elu
Aha ngwaahịa: 3 n’ime 1 Playlọikwuu Egwuregwu mara mma nke ụmụaka
Agba agba: Red / Blue / Purple
Mbukota: Akpa Aka
Nha: 260 * 110 * 90cm
Ihe: polyester ákwà
Maka afọ: Ihe karịrị ọnwa isii
• The multi-acha akwa bụ na-egbuke egbuke na-ekere òkè na ụmụaka nke afọ niile, ọ nwere ike na-enyo ụmụ gị anya na mbụ n'anya na nwere ike inyere-akpali gị na ụmụaka ’pụrụ ichetụ n'echiche na-emepụta a yi onwe ebe maka ụmụ gị iji zuru ike.
• Soft fabric & breathable ntupu imewe na-enye ohere maka a mma & gburugburu ebe obibi enyi na enyi ama egwuregwu maka ụmụaka.
• Easy Mbido & foldable na a fechaa mkpọchi uwe na-ebu akpa maka adaba nchekwa.
• tentlọ egwuregwu a na-eme ohere zuru oke maka ụmụaka igwu egwu ma zuru ike. Enwere ike ịtọ ha ma n'ụlọ ma ọ bụ n'èzí ma nye ụmụaka mmetụta nke nzuzo na ohere onwe ha ma na-enye ndị nne na nna ohere ka ha nyochaa ha maka nchekwa ha.
• Nnukwu Echiche Onyinye Childrenmụaka.
• Tinye ego na Oge Nwa Gị Si Ekike Ihe Oge Zuru Oke na Igwe onyonyo zuru oke, Nke na-abụghị mbadamba, Akwụkwọ onyinye na-abụghị kọmpụta. Ma ị nwere nke gị ma ọ bụ na-achọ ọmarịcha onyinye maka nwa nke enyi ma ọ bụ onye otu ezinụlọ, ụlọikwuu egwuregwu a bụ nnukwu onyinye.
• 3-in-1 Design: Kacha ọhụrụ 3Pcs ụmụaka egwu ụlọikwuu nwa ji egwuri egwu gụnyere a zita tent, a ọwara tent na a bọl olulu. Enwere ike iji ihe ọ bụla rụọ ọrụ ọnụ ma ọ bụ iche iche. Anyị nwere ike inye ụmụaka ụlọ egwuregwu ọbụlagodi n'ụlọ.Nke a Njikọ nke ụmụaka ụlọikwuu bụ onyinye kachasị mma maka ụmụaka.
• Ihe eji eme enyi na gburugburu ebe obibi: Ejiri 100% nwee akwa polyester nwere akwa abụọ na akwa akwa, akwa na-eguzogide ọgwụ na-eyi & akwa ma ikuku na-egbu ume na nro dị nro na ngwongwo na-agbanwe agbanwe na-enye nwa gị ahụmịhe na-atọ ụtọ. ihe kacha mma na ọ happinessụ.
• Obere ụmụaka egwuregwu ụmụaka: Mfe gbapụta na apịaji. Ogige olulu olulu nwere ike ibili na nke abụọ, ụlọ egwuregwu na-adabara ndị na-amụ ije na ụmụaka ime ụlọ na egwuregwu n'èzí. Abịa na a zipa dị fechaa buru ibu maka akpa adaba. A echiche onyinye ụmụaka maka nwa nwoke ma ọ bụ ụmụ agbọghọ. (Bọọlụ anaghị agụnye).
• purchasezụta ọtụtụ ebumnuche: houselọ egwuregwu maka ụmụaka na-enye nwa gị ohere ihi ụra ma gụọ ya, ebe ọwara ahụ nwere ike igosipụta ikike nwatakịrị nwere, nwatakịrị ahụ nwekwara ike itinye ihe egwuregwu ụmụaka ọ bụla masịrị ha n'ime ọdọ mmiri igwu egwu na ya. Agaghịzi echegbu onwe gị gbasara ịhọrọ onyinye ahụ. Egwuregwu ụmụaka a na-egwuri egwu ga-abụ onyinye zuru oke maka ụbọchị ọmụmụ, ekeresimesi, ma ọ bụ naanị ihe ijuanya nye ụmụ gị, ihe ụmụaka ji egwuri egwu kacha mma maka nnọkọ oriri na ọ picụ ,ụ, ntụrụndụ, ogige ntụrụndụ, ememme ma ọ bụ n'ụlọ.
• Unlimited fun maka ụmụaka: The 3 na 1 njikọ imewe n'etiti ụmụaka egwu ụlọikwuu, toddler ọwara na bọl olulu na-eweta ihe fun ụmụaka. Ihe eji egwuri egwu umuaka a na-enyere aka itolite ogwe aka na akwara ụkwụ na oke ikike. Childrenmụ gị ga-ekpori ndụ ruo ọtụtụ awa na-egwuri egwu n'ụlọikwuu egwuregwu a, nke a bụ ebe dị mma maka ụmụaka ịmụ ihe mgbe ha na-egwu egwu.
Nke gara aga: Lọikwuu na-ama ụlọikwuu 5/7 Onye Ezinụlọ entlọikwuu Ugboro abụọ N'elu Tlọikwuu
Osote: Campmụaka Maa ụlọikwuu Playhouse Pop Up N'èzí Tent Ime ụlọ Playhouse Playmụaka Play entlọikwuu
Tlọ agha ndị agha
N'èzí maa ụlọikwuu Hiking Cookware ọgbaghara Set na P ...
Maa ụlọikwuu Emergency Professional vlanahụ Kit Tac ...
Xtm ụlọ Top tent, Vlanahụ Fire Starter, Starter Magnesium oku, Na-adịgide Adị n'doorlọikwuu, Inflatable ụlọ Tlọikwuu, Gear Mberede Mberede,